စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု၏အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများ: အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်ဂျိမ်းစ် P. Herman, Ph.D ဘွဲ့ကို - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
James P. Herman, Ph.D ဘွဲ့ကို, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, စင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်, စင်စင်နာတီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်များ၏ဦးစီးဌာနများအတွက်ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအပါအဝင်အရေးပါသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစိတ်အပိုင်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ reinstatement ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါ hypothalamic-pituitary- adrenal (HPA) ဝင်ရိုးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်စာပေ၏လက်ရှိပြည်နယ်သုံးသပ်ပြီး။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဇီဝကမ္မ (သို့မဟုတ်စနစ်တကျ) စိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်; ဦးနှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမျိုးစုံကိုထံမှအချက်ပြသည့် hypothalamus အတွင်း paraventricular နျူကလိယ (PVN) ကို input ကိုပေးပို့ပါ။ သို့သော်တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းအလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုများ (psychogenic ဖိအား) ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းဖိအားပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ Psychogenic တုံ့ပြန်မှု amygdalar နှင့် infralimbic cortex ဆားကစ်စိတ်ဖိစီးမှုတားစီးပြစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် prelimbic cortex နဲ့ hippocampal အာရုံခံအချက်ပြနှင့်တကွ, limbic-PVN လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုစီးရီးကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Limbic-PVN ဆက်သွယ်မှုထိုကဲ့သို့သော stria terminalis နှင့် preoptic ဧရိယာ၏အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်ဒေသများတွင်အဓိကအား GABAergic အာရုံခံခြင်းဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းနေကြသည်။ အတိအကျယန္တရားမသိပေမယ့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, ပိုကောင်း PVN စိတ်လှုပ်ရှားအတွက် limbic စိတ်ဖိစီးမှု circuitry နှင့်ရလဒ်များကို၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုသာသက်ရောက်သည်။ အရေးပါမှု၏စူးရှသောနှင့်နာတာရှည်အရက်ထိတွေ့မှုစနစ်နှင့် psychogenic နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဖိစီးလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်သိကြသည်နှင့်အ limbic စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်၏ amygdalar နှင့် prefrontal အစိတ်အပိုင်းများအတွက်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲများ precipitating ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု dysregulation ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
Key ကိုစကားလုံးမြား: စွဲ; အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူ; အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု; စိတ်ဖိစီးမှု; ဖိအား; နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု; စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု; စိတ်ဖိစီးမှုမှဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု; psychogenic စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု; ဦးနှောက်; အာရုံကြောလမ်းကြောင်း; limbic-paraventricular လမ်းကြောင်း; limbic စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကို; hypothalamic-pituitary- adrenal ဝင်ရိုး; စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဒုက္ခ၏မျက်နှာကိုအတွက်လိုက်လျောညီထွေရှင်သန်မှု, ကျန်းမာရေး, လူအပေါင်းတို့သက်ရှိများ၏သုခချမ်းသာဘို့လိုအပ်ပါသည်။ မကြာခဏအဖြစ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ, "ဖိအား" ဟုအဆိုပါ hypothalamic-pituitary- adrenal (HPA) ဝင်ရိုး၏ activation အပါအဝင်မျိုးစုံရင်းမြစ်များမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု, တစ်ရပ်ကိုစတင်ပါ။1 အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (; လူသားတွေအတွက် cortisol, ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင် corticosterone ဆိုလိုသည်မှာ Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု) ၏ glucocorticoid အစိတ်အပိုင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Glucocorticoid Secret cognate adrenocorticosteroid receptors (ဆိုလိုသည်မှာ mineralocorticoid အဲဒီ receptor [MR] နှင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor [ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း]) ကနေတဆင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့်လိုက်လျောညီထွေအလေးပေးအထောက်အကူပြုဖို့စဉ်းစားထားသည်။ အဆိုပါ adrenocorticosteroid receptors ligand-န့်သတ်ထားထားပြီးကူးယူအချက်များ (De Kloet et al ။ 1998) အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောနျူကလီးယားအချက်-kB (အဲန်အက်ဖ်-kB) နှင့် Active ပရိုတိန်း-1 (AP-1 ကဲ့သို့သောအခြားမှတ်တမ်းအားပြိုင်မှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်ကူးယူ modulate နိုင်ပါတယ် ) (Webster နှင့် Cidlowski 1999) ။ Glucocorticoids လည်းယန္တရားများ (De Kloet et al ။ 2008) အချက်ပြ nongenomic အမြှေးပါးကနေတဆင့်ဦးနှောက်ကိုဓာတုဗေဒနှင့်အပြုအမူအပေါ်လျင်မြန်စွာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ Glucocorticoids ကနဦးစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (Keller-Wood ကနှင့် Dallman 1984) ၏ရပ်စဲအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ကနဦးတုန့်ပြန် (Munck et al ။ 1984) ကဖြစ်ပေါ် homeostasis ၏ရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ရန်စဉ်းစားနေကြသည်။
1 ဒီနှင့်အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများ၏အဓိပ္ပါယ်အဘို့, ဝေါဟာရ, စစကြည့်ပါ။ 522-524 ။
Glucocorticoid စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဇီဝကမ္မအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း (reflex တုံ့ပြန်မှုကိုယ်စားပြု) ကသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုချိတ်ဆက်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့်အစပျိုးနိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောဒါခေါ် "psychogenic" တုံ့ပြန်မှုသဘာဝ anticipatory သည်နှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ (Herman et al ။ 2003) ၏ပင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းပါဝငျသညျ။ ထို့ကြောင့် psychogenic တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုမှဆက်စပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လုံ့လရှိသူတစ်ဦးဆိုးရွားသောရလဒ်ကိုရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ရှင်သန်မှုများအတွက်အလားအလာအမြင့်ဆုံးနိုငျသောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်စေသက်ရှိများပြင်ဆင်ထားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုအရက်မှီခိုအပါအဝင်စွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ, play ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ relapse precipitate သို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲခြင်း (Sinha 2007) ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ နှင့်ဗဟို corticotropin-releasing ၏ activation; အရက်စားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု / glucocorticoids ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်နျူကလိယ accumbens (Yavich နှင့် Tiihonen 2002 Sutoo နှင့် Akiyama 2000) တွင် dopamine လွှတ်ပေးရေးဥပမာတိုးမြှင့်အပါအဝင်ဆုလာဘ် / စိတ်ဖိစီးမှု circuitry ၏မော်ဂျူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် အချက် (CRF) လမ်းကြောင်း (Heilig နှင့် Koob 2007) ။ အထူးသ, အရက်စားသုံးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအကြား link ကိုအရက်ထိတွေ့ခြင်း, အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးလိုပဲထိတွေ့မှုအပျေါမှာ glucocorticoids များလွှတ်ပေးရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်နှင့်အရှင်အမြိုးမြိုး၏စူးရှသော "ဖိအား" အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ် (Allen က et al တွေ့မြင် ။ 2011) ။
ဤဆောင်းပါးသည်စွဲလမ်းစေဖြစ်စဉ်များမှအထူးသဖြင့်ဆီလျော်သည်ဖြစ်သော HPA ဝင်ရိုး, (Marinelli နှင့် Piazza 2002 ကိုကြည့်ပါ) ကိုအာရုံစိုက်, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိကြောင်း neurocircuits ၏အဖွဲ့အစည်းသုံးသပ်ပြီး။ ဤအဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်အရေးကြီးသောများပါတယ်ကြောင့်လည်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအကြားလမ်းဆုံဒေသများတွင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ reflex စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေ Circuitry
အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး (ပုံ 1 ကြည့်ပါ) hypothalamus အတွက် paraventricular နျူကလိယ (PVN) အတွင်းအာရုံခံကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံ CRF ထို့နောက် anterior pituitary gland ကနေ adrenocorticotropin ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောပေါ်တယ်စောင်ရေသို့ vasopressin ဟော်မုန်း secrete ။ ACTH glucocorticoids (Herman et al ။ 2003 ကိုကြည့်ပါ) ဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်ကျသော, အ adrenal cortex ရောက်ရှိဖို့ရန်စနစ်တကျလည်ပတ်နေတဆင့်သွားရောက်ကာ။
ပုံ 1 ကြွက်များ၏ hypothalmic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး၏သိထား။ HPA တုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သောပျမ်းမျှထူးမြတ်သောအဆင့်မှာ hypophysial ပေါ်တယ်စောင်ရေအတွက် corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့်မိုင်နိုအက်စစ် vasopressin (AVP) အဖြစ် adrenocorticotropin (ACTH) secretagogues secretes သော medial parvocellular paraventricular နျူကလိယ (mpPVN) ၏ neurosecretory အာရုံခံခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေကြတယ် ။ ဤရွေ့ကား secretagogues က adrenal cortex မှာပေါင်းစပ်နှင့် glucocorticoids ၏လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်မထွက်ရစနစ်တကျလည်ပတ်သို့ ACTH ၏လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်။
ဦးနှောက်ဟာ HPA ဝင်ရိုးစည်းရုံးအားဖြင့် homeostasis မှသိသိသာသာစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်ရမယ်သည့်အခါ reflex စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, အရေးပေါ်အခြေအနေများ (ဥပမာ, ရောဂါကူးစက်, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး, ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စျေးမှာ) ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အာရုံခံသတင်းအချက်အလက် CRF လွှတ်ပေးရေး (Herman et al ။ 2003 ကိုကြည့်ပါ) ၏တိုက်ရိုက် activation ထုတ်လုပ်, first- သို့မဟုတ်ဒုတိယယူမှုကိုအာရုံခံအားဖြင့် PVN မှဆက်သွယ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သွေးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်အနိမ့်သွေးဖိအားထို့နောက် PVN (Cunningham နှင့် Sawchenko 2) တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်များနှင့်လျင်မြန်စွာ၏ noradrenergic activation ထုတ်ယူသော A1977 catecholaminergic ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စု (Palkovits နှင့် Zaborszky 1988), အတွက် brainstem အာရုံခံမှအာရုံခံအာရုံကြောကနေတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းနေသည် CRF အာရုံခံ (Plotsky et al ။ 1989) ။
အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပြင်, ဇီဝကမ္မပြည်နယ်အတွက်အပြောင်းအလဲများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များလည်းသွေးသည်ဦးနှောက်အတားအဆီးအပြင်ဘက်ဒေသများမှခညျြနှောငျကြောင်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အချက်များကနေတဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, (ရေဓါတ်ခန်းခြောက်အချက်ပြ) ဟော်မုန်း angiotensin II ကိုအတွက်အရံတိုးအဆိုပါ PVN CRF အာရုံခံမှ II ကိုပရိုဂျက်တိုက်ရိုက် angiotensin ပို့ပေးထားတဲ့, (ထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိခြင်းနှင့်အရည်ချိန်ခွင်လျှာထိန်းညှိသော) အ subfornical ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအတွက် receptors အားဖြင့်ခံစားခဲ့ရနေကြတယ်, HPA activation (Plotsky et al ။ 1988) ဆောင်ရွက်မှုတွေ။ ထိုကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်တချို့ကရံလှုံ့ဆော်မှု, မျိုးစုံယန္တရားများအားဖြင့်အချက်ပြနိုင်သောအချက်များထုတ်လုပ်ရန်; ဥပမာအားဖြင့် proinflammatory cytokine interleukin 1-b ရဲ့မရေအာရုံကြောအတွက်အာရုံခံအာရုံကြောအမျှင်မှတဆင့် HPA ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်ဟန်; ထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးပြင်ပတွင်ဖြစ်သည့်ဧရိယာ postrema, နှင့် A2 ဆဲလ်အုပ်စုတစ်စု (Ericsson က et al 1997 ။ Lee က et al 1998; ။ Wieczorek နှင့် Dunn 2006) ၏ဒေသတွင်း၌ perivascular ဆဲလ်တွေ။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလည်း brainstem PVN-ထုတ်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အနေနဲ့ကနဦး corticosterone တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်မှကနဦးထိတွေ့မှုတစ်ခုခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (Allen က et al ။ 2011) အဖြစ်သရုပ်ဆောင်အရက်အတူတသမတ်တည်း, ACTH နှင့် corticosterone လွှတ်ပေးရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရက်တို့က acute HPA ဝင်ရိုး activation brainstem noradrenergic စနစ်များ (Allen က et al ။ 2011) ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အရက်မှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုသိသိသာသာအချို့ဒီဂရီမှ, အရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက် HPA excitatory သက်ရောက်မှုအချိန်ကျော် habituate သောအကြံပြုစူးရှသောအရက်ထိတွေ့မှု (Rivier 1995) မှ HPA ဝင်ရိုး activation blunts ။
အဆိုပါ Limbic စိတ်ဖိစီးမှု-ထိန်းချုပ်ရေးကွန်ယက်: Anticipatory စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ချက် Subserving Circuitry
အတော်လေးရှားပါးစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်စဉ် "အရေးပေါ်အခြေအနေ" သောကြောင့်, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏အများစုသည်ယခင်အတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်ပင်အစီအစဉ်များကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအလားအလာများအနက်ပတျသကျ, သဘာဝ anticipatory ဖြစ်ကြသည်။ Anticipatory စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအကြီးအကျယ်ထိုကဲ့သို့သော hippocampus, medial prefrontal cortex (mPFC), နှင့် amygdala အဖြစ် limbic forebrain အဆောက်အဦများ, (Ulrich-Lai နဲ့ Herman 2009 ကိုကြည့်ပါ) ကထိန်းချုပ်ထားရသည်။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အဦများအားလုံးလုပ်ငန်းများ၌အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ခံယူခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုလာဘ်များနှင့်ခံစားချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်ဆွလေ့လာမှုများ hippocampus အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ hippocampus ၏လျှပ်စစ်ဆွကြွက်များနှင့်လူသားတွေအတွက် glucocorticoid လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းစေပါသည်။ အဆိုပါ hippocampus ပျက်စီးမှု, ဒါမှမဟုတ်ဝေးကနေ Impulses သတင်းပို့တင်ဆောင်လာသောအာရုံကြော (ဆိုလိုသည်မှာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် fornix), Herman et al တွေ့မြင်, မူလတန်းကိုးကားများအတွက်အခြေခံ glucocorticoid အဆင့်ဆင့်မှတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာပြန်လာ (အဖြစ် psychogenic ဖိအား (ဥပမာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း) နှင့်မန်နီးဖက်စ်မှပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေ ။ 2003; Jacobson နှင့် Sapolsky 1991) ။ တချို့ကအချက်အလက်များကို hippocampus လည်း Basal HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာမထားဘူး (; Jacobson နှင့် Sapolsky 2003 ။ Herman et al 1991) ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ psychogenic HPA ဝင်ရိုးအပေါ် hippocampal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏သက်ရောက်မှုတုံ့ပြန်မှုဟာ ventral subiculum (vSUB), အ ventral hippocampus (Herman et al ။ 2003) ၏အဓိက subcortical output ကိုမှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါတယ်အလေးပေး။ ကြွက်များတွင် vSUB ၏ discrete ကိုတွေ့ရှိရပါသည် PVN CRF peptide နှင့် mRNA စကားရပ်မြှင့်တင်ရန်နှင့် corticosterone လွှတ်ပေးရန်နှင့် PVN activation တိုးမြှင့် (FOS mRNA ထုတ်ဖော်သော induction ကဆုံးဖြတ်ကဲ့သို့) ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း (Herman et al ။ 1998) မှတုန့်ပြန်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းပေါ်တွင် vSUB ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖိအားတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ vSUB ၏တွေ့ရှိရပါသည်အသစ်အဆန်းမှ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုရှည်ပေမယ့် (အီရှူရှိုက်မိပါမှဥပမာ) reflex တုံ့ပြန်မှု (Herman et al ။ 1998) မထိခိုက်ပါဘူး။ အချို့ကသက်သေအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါဒြပ် Steroid တစ်မျိုး dexamethasone (Magarinos et al ။ 1987) အားဖြင့် HPA ဝင်ရိုး၏တုံ့ပြန်ချက်တားစီးပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်အဖြစ် glucocorticoids, anticipatory တုံ့ပြန်မှု၏ hippocampal တားစီးနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင် hippocampus အပါအဝင် forebrain ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းဖျက်ခြင်း, အတူကြွက်တွေထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့အသစ်အဆန်းမှတုံ့ပြန်မှု (သို့သော်မပေး hypoxia) နှင့် corticosterone လွှတ်ပေးရန်၏ချို့ယွင်း dexamethasone ဖိနှိပ်မှု (။ ။ Furay et al 2005 Boyle et al 2008) ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရှိသည်။ အတူတူ, data သည် hippocampus အထူးသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် psychogenic ဖိအားတုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်စေ့စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ hippocampus မတူဘဲ, အ amygdala အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါ amygdaloid ရှုပ်ထွေး၏ကြီးမားသောတွေ့ရှိရပါသည် (Herman et al ကြည့်ပါ။ 2003) HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုလျှော့ချသော်လည်း Amygdalar ဆွ, glucocorticoid လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်။ သို့သော် amygdala အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု-integration လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်မှတ်သားငျဒသေအထူးပြုရှိသေး၏။ အဆိုပါ amygdala (CeA) ၏ဗဟိုနျူကလိယထိုကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်သွေးဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် homeostatic ဖိအားမှအလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ် (Dayas et al 2001; ။ Sawchenko et al 2000 ။ ) ။ အဆိုပါ CeA ၏တွေ့ရှိရပါသည်လှုံ့ဆော်မှုဤအမျိုးအစားများမှ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု attenuate သော်လည်းမထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖို့ (Dayas et al 1999; ။ Prewitt နှင့် Herman 1997; ။ Xu et al 1999) ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, amygdala (MEA) ၏ medial နျူကလိယထိုကဲ့သို့သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးစားပေး FOS တုံ့ပြန်မှု, (။ ။ Sawchenko et al 2001 Dayas et al 2000) ပြသထားတယ်။ အဆိုပါ MEA ၏တွေ့ရှိရပါသည် 1-ခသို့မဟုတ်အီမွှန် interleukin ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့အလင်းနှင့်အသံကလှုံ့ဆော်မှုမှမဟုတ်ပရိုတိန်း၏စနစ်တကျဆေးထိုးဖို့ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချ (Dayas et al 1999; ။ Feldman et al 1994 ။ ) ။ ထို့ကွောငျ့ reflex နှင့် anticipatory တုံ့ပြန်မှု discrete amygdaloid circuitry နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်စေခြင်းငှါပုံရသည်။
အဆိုပါ mPFC စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ အဆိုပါကြွက် PFC အားလုံးကွဲပြားမှုစေ့စ့စပ်စပ်စူးရှသောကဖိစီးမှုတို့က activated နေကြသည်။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှု activation ၏ဇီဝကမ္မအကျိုးဆက်များဒေသအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများဤဒေသပျက်စီးမှုစူးရှ psychogenic (သို့သော် homeostatic မဟုတ်) ဖိအား (Diorio et al မှ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုရှည်ကြောင်းပြသကြသောကြောင့် mPFC (PL) ၏ prelimbic ဌာနခွဲစိတ်ဖိစီးမှုတားစီးအတွက်အရေးပါသည် 1993; ။ ။ Figueiredo et al 2003; Radley et al ။ 2006), ဆွစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (ဂျုံးစ် et al ။ 2011) ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သော်လည်း။ အဆိုပါ mPFC (Akana et al 2001 ။ Diorio et al 1993 ။ ) ဖိအားတုံ့ပြန်မှုဒေသခံ glucocorticoid implants anticipatory (သို့သော် reflex မဟုတ်) တားစီးသောကွောငျ့ HPA တုံ့ပြန်မှု၏ glucocorticoid တုံ့ပြန်ချက်များအတွက် site တစ်ခုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ပို ventral infralimbic PFC (IL) မှာညွှန်ကြားကိုတွေ့ရှိရပါသည်တစ်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဆိုပါ IL ပျက်စီးမှု (2009 ။ Tavares et al) psychogenic ဖိအားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်လည်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတုံ့ပြန် PVN Fos activation attenuates (Radley et al ။ 2006) ။ ထို့ကြောင့် PL နှင့် IL စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပုံရသည်။
ရှိတဲ့ Relay အလုပ်လုပ်ခြင်း: Limbic-PVN ကွန်ယက်
အဆိုပါ hippocampus, prefrontal cortex နှင့် amygdala အားဖြင့် PVN ၏ stimulation အတော်လေးကန့်သတ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအဆောက်အဦများအားဖြင့် HPA ဝင်ရိုး output ကို၏စည်းမျဉ်း (ပုံ2ကိုကြည့်ပါ) ကြားခံ synapses လိုအပ်သည်။ ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အခြားမှပရိုဂျက်ခြေရာကောက်ကြောင်းလေ့လာရေး (ဆိုလိုသည်မှာကျေးရွာအုပ်စု-tracing လေ့လာမှုများ) ကို stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယအပါအဝင် subcortical ဒေသများတစ်အရေအတွက်, ကိုဖြတ်သန်း bisynaptic limbic-PVN ဆက်သွယ်မှုများအတွက်အလားအလာထုတ်ဖေါ်, dorsomedial hypothalamus (ထို subparaventricular နျူကလိယတို့အပါအဝင်), medial preoptic ဧရိယာနှင့်အနီးအနား PVN ဒေသ (Cullinan et al 1993; ။ Prewitt နှင့် Herman 1998; Vertes 2004) ။ လေ့လာမှုများ tracing Dual- ကွာ vSUB, MEA နှင့် CeA (ဆိုလိုသည်မှာ efferent အာရုံကြော) မှ Impulses သတင်းပို့တင်ဆောင်လာသောအာရုံကြောကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ကိုက်ညီဤဒေသများတွင် PVN-ထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကြောင်းညွှန်ပြ (Cullinan et al 1993; ။ Prewitt နှင့် Herman 1998) ။
ပုံ2အဆိုပါ prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus ထံမှ limbic စိတ်ဖိစီးမှု-integration လမ်းကြောင်း၏သိထား။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex (mPFC) စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဝင်ရိုးဟာ hypothalmic-pituitary-adrenal အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ရပ်များ (HPA) ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသည့် prelimbic ၏အာရုံခံ (pl) နှင့် infralimbic cortical (il), subsumes ။ အဆိုပါ pl တိုက်ရိုက် GABAergic စီမံချက်များပေးပို့နှစ်ဦးစလုံး၏ထိုသို့သောအနီးအနား PVN အဆိုပါ stria terminalis (BNST) ၏ (အနီးအနား paraventricular နျူကလိယ) ဇုန်နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးများမှ excitatory Project (မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့, မြှားနှင့်အညီပြည့်စုံလျက်), ပို့ပေး အဆိုပါ medial parvocellular PVN (ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်းအဖြစ် delineated, ရင်ပြင်ထဲမှာအဆုံးသတ်တွေက dotted လိုင်းများ) ။ ဒါက Two-အာရုံခံဆဲလျကွင်းဆက်သဘာဝ inhibitory ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, infralimbic cortex စီမံကိန်းများဖြစ်သည့်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု (NTS) နှင့်ဒီ cortical ဒေသမှ PVN စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ဦးနည်းလမ်းများခဲ့ရသည်, ထို PVN မှ excitatory စီမံချက်များပို့ပေးရသော anterior BNST ၏နျူကလိယအဖြစ်ဒေသများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ventral subiculum (vSUB) (ပု subparaventricular ဇုန် [sPVN] အပါအဝင် medial preoptic ဧရိယာ [POA] နှင့် dorsomedial hypothalamic နျူကလိယ [vlDMH] ၏ ventrolateral ဒေသ) ကို posterior BNST, အနီးအနား PVN ဒေသအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ subcortical ဒေသများမှ excitatory စီမံချက်များပို့ပေး , အရာရှိသမျှတို့သည် PVN မှ GABAergic စီမံချက်များပေးပို့နှင့် transsynaptic တားစီးဆကျသှယျဖို့များပါတယ်။ အဆိုပါ medial amygdaloid နျူကလိယ (MEA) တစ်ဦး transsynaptic disinhibition ဆွဲထုတ်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သော BNST, POA နှင့် sPVN အဖြစ် GABAergic PVN-ထုတ်လုပ်တဲ့လူဦးရေမှ inhibitory စီမံချက်များပေးပို့သည်။ အလားတူအစီအစဉ်ဖွယ်ရှိ ventrolateral BST ရန်နှင့်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ, အ vlDMH မှ GABAergic ထွက်သွားပို့ပေးရသောအလယ်ပိုင်း amygdaloid နျူကလိယ (CeA), အဘို့တည်ရှိကြောင်း။ အဆိုပါ CeA လည်း GABAergic အာရုံခံမှမှန်းချက်ရဲ့
အဆိုပါ PVN မှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုစီမံချက်များ disinhibit စေခြင်းငှါအရာ NTS အတွက်။
စိတ်ဖိစီးမှု effector စနစ်များအပေါ် PL နှင့် IL ၏ differential ကိုသက်ရောက်မှု subcortical ပစ်မှတ်မှာသူတို့ရဲ့မှတ်သားမတူကွဲပြားရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ PL သိသိသာသာစီမံချက်များဆုချ-သက်ဆိုင်ရာမှတားစီးဝင်ရိုး HPA ဆက်စပ်သောနျူကလိယ accumbens နှင့် basolateral amygdala အပါအဝင်လမ်းကြောင်း, အဖြစ် posterior BNST ရှိပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, IL အဆိုပါ CeA, အတိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု (NTS), anteroventral BNST နှင့် dorsomedial hypothalamus (Vertes 2004) ၏နျူကလိယတို့အပါအဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများနှင့်အတူကြွယ်ဝသောအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။ ထို့ကွောငျ့ PFC စိတ်ဖိစီးမှု activation ၏အသားတင်အကျိုးသက်ရောက် PL နှင့် IL ထွက်သွား၏ subcortical ပေါင်းစည်းမှုလိုအပ်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စု၏, mPFC, hippocampal နှင့် amygdalar efferents (ပုံ2ကြည့်ပါ) PVN ဖို့ပရိုဂျက် -carrying γ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) ပေးပို့ခြင်းဒေသများတွင်အာရုံစိုက်ခံရဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် Sub-innervated PVN-ထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံ၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်က phenotype အတွက် GABAergic ဖြစ်ကြသည်။ စီမံကိန်းသည် vSUB ၏အာရုံခံ (အဖြစ် mPFC), အရှင်သည်ဤဆဲလ်စိတ်ဖိစီးမှုများက activation အောက်ပါ PVN ၏ transsynaptic တားစီးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းအကြံပြု, သဘာဝ glutamatergic ဖြစ်ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, MEA နှင့် CeA ၏အနာဂတ်အာရုံခံအဆိုပါ PVN ၏ amygdalar စိတ်လှုပ်ရှား sequential ဂါဘမြို့သား synapses (Herman et al ။ 2003) နှငျ့ပတျသကျသော, disinhibition ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်း။ အကြံပြုခြင်း, အများစု GABAergic များမှာ
ဒါဟာအဓိက limbic စိတ်ဖိစီးမှု-integration အဆောက်အဦများ (CeA, MEA, vSUB, IL, PL) ၏အားလုံးထံမှသွင်းအားစုအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းအတွက် BNST, အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ် (Cullinan et al 1993; ။ ဒေါင် et al 2001; ။ Vertes 2004) ။ မှတ်စု၏ကွဲပြားခြားနားသော BNST ငျဒသေစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဝင်ရိုး HPA ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှိုင်းယှဉ်တားစီးတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပုံရသည်။ ဥပမာ, BNST ၏ posterior medial ဒေသ၏တွေ့ရှိရပါသည်သည့် ACTH နှင့် corticosterone လွှတ်ပေးရန်၏ပြင်းအားနှင့် PVN Fos activation တိုးမြှင့် (Choi et al ။ 2007), စိတ်ဖိစီးမှုတားစီး၏ဗဟိုပေါင်းစည်းမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ BNST ၏ anteroventral အစိတ်အပိုင်း၏တွေ့ရှိရပါသည်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (Radley et al ။ 2009) မြှင့်တင်ရန်။ ဆနျ့ကငျြ, HPA ဝင်ရိုးလျှော့ချ BNST အဆိုပါ anterior ၏ပိုကြီးကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Choi et al ။ 2007) တုံ့ပြန်မှုအလေးပေး, စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်လှုပ်ရှား၌ဤဒေသတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီ။ ထို့ကြောင့် activation နှိုင်းယှဉ်စိတ်ဖိစီးမှုတားစီးအတွက် BNST ၏အခန်းကဏ္ဍကို compartmentalized နှင့် BNST ၏တစ်ဦးချင်းစီငျဒသေ၏ limbic ပစ်မှတ်များတွင်ကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ anteroventral ဒေသဟာ CeA နှင့် IL efferents (Canteras နှင့် Swanson 1992 အများစုဆီက input ကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းဥပမာ, posterior medial BNST, အ vSUB နှင့် MEA ထံမှမိုးသည်းထန်စွာ innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံ; ။ Cullinan et al 1993; ဒေါင် et al 2001; ။ Vertes 2004) ။
အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာနှင့်အနီးအနား PVN ဒေသများ GABAergic အာရုံခံတွေနဲ့အကြီးအကျယ်လူဦးရေဖြစ်ကြပြီးထင်ရ
အဓိကအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုတားစီး (Herman et al ။ 2003) modulate ရန်။ ဤအဒေသများတွင်အာရုံခံအဓိက MEA (disinhibition) ကနေ vSUB (တိုးမြှင့်တားစီး) သို့မဟုတ် GABAergic သွင်းအားစုအနေဖြင့်အချိုမှုသွင်းအားစုများနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်သော PVN မှလုပ်သူများတားစီးပေးယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါ medial preoptic နျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည် HPA ဝင်ရိုးတိုးမြှင့် (မူလတန်းကိုးကားဘို့, Herman et al ။ 2003 ကိုကြည့်ပါ) စိတ်ဖိစီးမှုတားစီးနေတဲ့မူလတန်းအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, medial amygdalar ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုအလေးပေး။ အဆိုပါအနီးအနား PVN ဒေသတွင်း၌အချိုမှုအချက်ပြ၏ဒေသခံတားစီးကိုလည်း HPA ဝင်ရိုးဤဒေသတွင်ရပ်စဲ limbic axon PVN activation modulate စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, တုံ့ပြန်မှု (Ziegler နှင့် Herman 2000) အလေးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒါဟာထိုကဲ့သို့သော dorsomedial နျူကလိယ (Herman et al ။ 2003) အဖြစ် PVN မှ limbic efferents ချိတ်ဆက်သည်အခြား hypothalamic ဒေသများ၏အခန်းကဏ္ဍရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပဍိပက္ခရလဒ်များကိုဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်အချိုမှု၏လေးလံသောရောစပ်နှင့်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံလူဦးရေ (Herman et al ။ 2003) ၏, အောက်ပါတွေ့ရှိရပါသည်, activation, သို့မဟုတ်ဤ dorsomedial hypothalamus ၏ inactivation လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
အပိုဆောင်းအလားအလာ relays များအပြည့်အဝစူးစမ်းခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ (Herman et al ။ 2004) ဥပမာ, raphe အရေးပါနှင့် NTS innervate အဆိုပါ PVN, (ထိုသို့သော PL ကဲ့သို့) limbic အဆောက်အဦများကပစ်မှတ်ထားနေကြသည် (Vertes 2003 ကိုကြည့်ပါ) နှင့် serotonin နဲ့ norepinephrine ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်လှုပ်ရှားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြတယ်, အသီးသီး။ သို့သော်သေးအဖြစ်ဤဒေသများမှတစ်ဆင့် bisynaptic limbic-PVN relays များဖော်ပြခြင်းမရှိခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများရှိပါသည်။
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ချက် Subserving Circuitry
စိတ်ဖိစီးမှုမှအချိန်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ထိတွေ့မှု (GCs အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာမြင့်တက်မှစွပ်စွဲ) လျှော့ thymus အလေးချိန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာ HPA ဝင်ရိုး၏ရေရှည် upregulation, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; (တိုးလာ ACTH လွှတ်ပေးရန်မှစွပ်စွဲ) တိုးမြှင့် adrenal အရွယ်အစား; ACTH တိုးမြှင် adrenal sensitivity ကို; ဝတ္ထုဖိအား facilitated HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု; တချို့အတွက် (သို့သော်
အားလုံးမဟုတ်) Paradigm / အခြေအနေများ, မြင့်မားသော Basal GC လျှို့ဝှက်ချက် (Herman et al 1995 ကိုကြည့်ရှုလော့။ ။ Ulrich-လိုင် et al 2006) ။ အရံဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများ HPA upregulation ဗဟိုကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, တိုးမြှင့ PVN CRF နှင့် vasopressin mRNA (Herman et al ။ 1995) ကလိုက်ပါသွားကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု glutamatergic နှင့်တိုးမြှင် excitatory Synaptic drive ကို (Flak et al ။ 2009) နဲ့ကိုက်ညီ PVN CRF အာရုံခံ somata နှင့် dendrites, abutting noradrenergic terminal ကိုတိုးပွားစေပါသည်။
နာတာရှည် HPA ဝင်ရိုး activation ဗဟိုယန္တရားများဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးရှိသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် limbic forebrain များ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ PFC, hippocampus ၏ differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုနှင့် amygdala တာရှညျ drive ကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ dendritic တိုးချဲ့မှု amygdala အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း Dendritic ရုပ်သိမ်းမှု, hippocampal နှင့် mPFC ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက်ထင်ရှား၏ (မူလတန်းကိုးကားဘို့, Ulrich-Lai နဲ့ Herman 2009 ကိုကြည့်ပါ): မှတ်စု၏, ရှိသမျှဒေသများတွင်သိသိသာသာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် neuroplastic အပြောင်းအလဲများပြသပါ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကတားစီးကျော်စိတ်လှုပ်ရှားမျက်နှာသာ, HPA excitatory ဆားကစ်မှ limbic input ကို၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
Enhanced amygdalar drive ကိုနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါဗေဒအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှအဆိုပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဟာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-စုဆောင်းလမ်းကြောင်းအဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီသော CeA CRF စနစ်, မြှင့်လုပ်ဆောင် (Dallman et al ။ 2003) ။ သို့သော် CeA (ရှောလမုန်သည် et al ။ 2010) နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်ခံရဖို့မထင်ထားဘူး။ ထို့အပြင် MEA ၏တွေ့ရှိရပါသည်ကိုလည်း HPA ဝင်ရိုး (ရှောလမုန်သည် et al ။ 2010) ၏နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု drive ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဝင်ရိုး amygdalar hyperactivity နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် HPA အကြားအလုံးစုံ link ကိုခိုင်မြဲစွာတည်လိမ့်မရှိသေးပါ။
အဆိုပါ hypothalamus (PVT) ၏ paraventricular နျူကလိယဟာနာတာရှည်-စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ပုံရသည်။ အဆိုပါ PVT ၏တွေ့ရှိရပါသည်သည့်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, ဝတ္ထုဖိအား (Bhatnagar နှင့် Dallman 1998) မှ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုများနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုာင်းပိတ်ဆို့။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, PVT ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Bhatnagar et al ။ 2002) ထပ်ခါတလဲလဲဖိအား HPA ဝင်ရိုးလေ့၏ဖြစ်စဉ်ကိုနှောင့်အယှက်။ အတူတူယူ, data သည် PVT HPA ဝင်ရိုးကြာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုများ၏အခြေအနေတွင်မောင်း gating အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မှတ်စု၏, ထို PVT နှင့်စူးရှစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ် limbic forebrain က်ဘ်ဆိုက်များဤဒေသတွင် corticolimbic စိတ်ဖိစီးမှုလက်ငင်း၏ဖြစ်နိုင်သောညှိနှိုင်းဘို့ခွင့်ပြု, (Vertes နှင့်ဟူးဗား 2008 ကိုကြည့်ပါ) အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ အဆိုပါ PVT ကိုလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဇီဝကမ္မ status ကိုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက် positioned (arousal ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းချုပ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ) ကို dorsolateral hypothalamus ၏ (acetylcholine, serotonin, နှင့် noradrenaline များလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိပေးသော) orexinergic အာရုံခံထံမှသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် brainstem တက်နေသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်စနစ်များကို။
အဆိုပါ BNST လည်းနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစည်းရန်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ anteroventral BNST ၏တွေ့ရှိရပါသည်စူးရှသောကဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှု attenuate, ဒါပေမယ့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (Choi et al ။ 2008) အားဖြင့် HPA ဝင်ရိုး၏ပံ့ပိုး potentiate ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကဒီဒေသကြာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့တုံ့ပြန်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်စုဆောင်းယူဆရကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောလူဦးရေနှင့်အတူ HPA ဝင်ရိုးထိန်းချုပ်နာတာရှည်-မှီခိုအခန်းကဏ္ဍရှိပြီးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရင်းနှီးသောပု anterior BNST နှင့် mPFC အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု, hippocampus နှင့် amygdala ပေးထားသောကြောင့် BNST အာရုံခံနာတာရှည် limbic လှုပ်ရှားမှုအတွင်း stress- သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ် innervation ပုံစံများအားဖြင့် "reprogrammed" စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှု Circuitry နှင့်အရက်
အဆိုပါအရက်စာပေနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စာရှုသူများအဘယ်သူမျှမသံသယအထက်ပါဖော်ပြထားစိတ်ဖိစီးမှု circuitry နှင့်အရက်စားသုံးမှုချိတ်ဆက်ဦးနှောက် circuitry အကြားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာထပ်နေသည်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒေတာ excitatory လမ်းကြောင်းစွဲ၏ဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု (နှင့် HPA ဝင်ရိုး) ၏ activation ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြု, (Koob 2009 ကိုကြည့်ပါ) အရက်မှီခိုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် CeA, BNST နှင့် noradrenergic စနစ်များများအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်တိုးမြှင် CeA / BNST CRF စကားရပ်အနုတ်လက္ခဏာစွဲလမ်းပြည်နယ်များ (ဥပမာဆုတ်ခွာ၏ရှောင်ရှားခြင်း) နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ် (Koob 2009) ၏အရက်-သွေးဆောင်စုဆောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်သောအယူအဆမှဦးဆောင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ဆင်တူပါသည်။ ပြောင်းပြန်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ activation သိသိသာသာအရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေနိုင်တယ်မထွက်ရတဲ့ယန္တရားအကြံပြုသည် amygdaloid ရှုပ်ထွေးနေတစ်ဆင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအိပ်ရေးဝြခင်းကိုမှလူသိများသည် (Ulrich-လိုင် et al ။ 2010) ။
အရက်လည်း medial prefrontal cortical အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, နှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုလူသားတွေအတွက် prefrontal hypofunction (ဆင်းရဲသားတို့ကိုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်) (Abernathy et al ကြည့်ပါ။ 2010) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ mPFC အဆိုပါ CeA နှင့် BNST နှစ်ဦးစလုံးမှစီမံကိန်းများနှင့်, အနည်းဆုံး prelimbic ဒေသ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, HPA တားစီးနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ amygdalar-BNST ဆားကစ်တွင်တွေ့မြင် function ကို၏အမြတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခုနှစ်တွင်ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်နာတာရှည်အရက်သုံးစွဲခြင်းအကြောင်းတရားများစိတ်ဖိစီးမှု hyperreactivity များအတွက်သက်ရှိ biasing, အ limbic စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးပြောင်းလဲမှုများကိုမှတ်သားပါ။ အကြံပြု
ယေဘုယျအား, ထို HPA ဝင်ရိုး၏လုံလောက်သောထိန်းချုပ်မှုရေတိုနှင့်ရေရှည်ရပ်တည်ရေးနှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှု၏အဓိကသော့ချက်ထိန်းချုပ်မှု node များအရက်များကပစ်မှတ်ထားနှင့်အရက်သူ့ဟာသူနေတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုပါဝငျဖြစ်ကြောင်းပေးထားသောကြောင့် corticosteroids သည်ဝင်ရိုး၏ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံး" စားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မနှစ်ဦးစလုံးစည်းမျဉ်းနှင့်အတူလေးနက် interaction ကရှိသည်သောအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ HPA စည်းမျဉ်းနှင့်အစွဲဆားကစ်များအကြားထပ်ရေရှည်ထိခိုက်အရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုသက်ရောက်မှုအဖြစ်မှီခိုကိုယ်တိုင်ကနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအပစ်မှတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါသော့ချက်အချက်များသတ်မှတ်။ circuit ကိုထပ်တူ၏အရေးပါမှုကိုထပ်မံ abstinence တည်ထောင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းအားထုတ်မှုရှုပ်ထွေးသောအသက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သောက်သုံးရေအကြားအစွမ်းထက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများကအလေးပေးသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ငွေ MH-049698, MH-069680 နှင့် MH-069725 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Abernathy K ကို .; Chandler, LJ; နှင့် Woodward, JJ အရက်နှင့် prefrontal cortex ။ Neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း 91: 289-320, 2010 ။ PMID: 20813246
Akana, SF; Chu, တစ်ဦးက .; Soriano, L ကို .; နှင့် Dallman, MF Corticosterone adrenocorticotropic ဟော်မုန်း, အင်ဆူလင်နှင့်အဆီဝင်းများအဖြစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ် prefrontal cortex နဲ့ amygdala အတွက် site ကို-တိကျတဲ့နှင့်ပြည်နယ်မှီခိုသက်ရောက်မှုပြုပြင်။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ် 13(7):625–637, 2001. PMID: 11442777
Allen က, CD ကို; Lee က, S ကို .; Koob, gf; နှင့် Rivier, C တို့ချက်ခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အရက်၏ထိတွေ့ခြင်းတာရှညျဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက်, အပြုအမူ, နဲ့ Immunization 25(Suppl. 1):S50–S60, 2011. PMID: 21300146
Bhatnagar, အက်စ်နှင့် Dallman, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဝတ္ထုဖိအား hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီဘို့အမ် Neuroanatomical အခြေခံ။ neuroscience 84(4):1025–1039, 1998. PMID: 9578393
Bhatnagar, S ကို .; Huber, R ကို .; Nowak, N ကို .; နှင့် Trotter, ထပ်ခါတလဲလဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ဖို့ hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုများ၏ posterior paraventricular thalamus ပိတ်ပင်တားဆီးမှုလေ့၏ P. ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ် 14(5):403–410, 2002. PMID: 12000546
Boyle, အမတ်, ဘရူဂျေ; Funatsu, M က .; et al ။ forebrain glucocorticoid အဲဒီ receptor ၏ဝယ်ယူလိုငွေပြမှု adrenal ဝင်ရိုးစည်းမျဉ်းများနှင့်အမူအကျင့်အတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်သည်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု 102(2):473–478, 2005. PMID: 15623560
Canteras, NS နှင့် Swanson, အ amygdala, septum နှင့် hypothalamus ဖို့ ventral subiculum ၏ LW စီမံချက်, ကြွက်များတွင်တစ်ဦးက PHAL anterograde ကျေးရွာအုပ်စု-tracing လေ့လာမှု။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ် 324(2):180–194, 1992. PMID: 1430328
Choi, DC က; Evanson, NK; Furay, AR; et al ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏ anteroventral အိပ်ရာနျူကလိယ differential စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 149(2): 818–826, 2008. PMID: 18039788
Choi, DC က; Furay, AR; Evanson, NK; et al ။ အဆိုပါ stria terminalis ငျဒသေ၏အိပ်ရာနျူကလိယ differential hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ: limbic သွင်းအားစုများ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 27(8):2025–2034, 2007. PMID: 17314298
Cullinan, WE; Herman, JP; နှင့် Watson, အ hypothalamic paraventricular နျူကလိယနှင့်အတူ SJ Ventral subicular အပြန်အလှန်: အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယတစ်ဦးလက်ဆင့်ကမ်းအဘို့သက်သေသာဓက။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ် 332(1):1–20, 1993. PMID: 7685778
Cunningham, ET, Jr နှင့် Sawchenko, အ paraventricular မှ noradrenergic သွင်းအားစုများနှင့်ကြွက် hypothalamus ၏ supraoptic အရေးပါ၏ PE Anatomical သတ်မှတ်ချက်။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ် 274(1):60–76, 1988. PMID: 2458397
Dallman, MF; Pecoraro, N ကို .; Akana, SF; et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်း: "နှစ်သိမ့်အစာ" ၏အသစ်အမြင်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု 100(20):11696–11701, 2003. PMID: 12975524
Dayas, CV ကို; Buller, KM; crane, JW; et al ။ ဖိအားအမျိုးအစား: ထူးခြားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားဟာ amygdala နှင့် medullary noradrenergic ဆဲလ်အုပ်စုများအတွက်ထူးခြားတဲ့စုဆောင်းမှုပုံစံထုတ်ယူ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 14(7):1143–1152, 2001. PMID: 11683906
Dayas, CV ကို; Buller, KM; တစ်ခုစိတ်ခံစားမှုဖိအားများနှင့်နေ့က TA Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု: အ medial ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်အထောက်အထားရှိသော်လည်းဗဟို amygdala ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 11(7):2312–2322, 1999. PMID: 10383620
de Kloet, ER; လှိုဏ်, H ကို .; ယောလ, ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်အမ် Corticosteroid ဟော်မုန်း: လျင်မြန်စွာ-and နှေးကွေးနေ။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 29(2):268–272, 2008. PMID: 18067954
de Kloet, ER; Vreugdenhil, E ကို .; Oitzl, က MS; ယောလ, ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါအတွက်အမ်ဦးနှောက် corticosteroid အဲဒီ receptor ဟန်ချက်။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 19(3):269–301, 1998. PMID: 9626555
Diorio, D ကို .; Viau, V ကို .; နှင့် Meaney, MJ စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် medial prefrontal cortex (cingulate gyrus) ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 13(9):3839–3847, 1993. PMID: 8396170
dong, HW; Petrovich, GD; နှင့် Swanson, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာအရေးပါဖို့ amygdala ကနေစီမံကိန်းကို LW မြေမျက်နှာသွင်ပြင်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ 38(1–2):192–246, 2001. PMID: 11750933
Ericsson က, တစ်ဦးက .; Aria, C ကို .; သွေးကြောသွင်း Interleukin-1 ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု-ဆက်စပ် neuroendocrine circuitry ၏ activation အတွက် intramedullary Prostaglands လုပ်လိုက်တာ-မှီခိုယန္တရားနှင့် Sawchenko, PE အထောက်အထား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 17(18):7166–7179, 1997. PMID: 9278551
Feldman, S ကို .; Conforti, N ကို .; Itzik, တစ်ဦးက .; နှင့် Weidenfeld, CRF-41, ACTH နှင့်အာရုံကြောလှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါ corticosterone တုံ့ပြန်မှု၏ amygdaloid ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဂျေ Differential အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန 658(1–2):21–26, 1994. PMID: 7834344
Figueiredo, HF; Bruestle, တစ်ဦးက .; ခန္ဓာကိုယ်, B, .; et al ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex differential ဖိအားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အဆိုပါ forebrain အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်က c-fos စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 18(8) :2357–2364, 2003. PMID: 14622198
Flak, ဖြစ်မှု; Ostrander, MM; Tasker, JG; နှင့် Herman, အ PVN အတွက် JP နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် neurotransmitter plasticity ။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ် 517(2):156– 165, 2009. PMID: 19731312
Furay, AR; Bruestle, AE; နှင့် Herman, JP စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် forebrain glucocorticoid အဲဒီ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 149(11):5482–5490, 2008. PMID: 18617609
Heilig, အမ်နှင့် Koob, အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဘို့အ gf တစ်ဦးကသော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 30(8):399–406, 2007. PMID: 17629579
Herman, JP; အဒမ်, D ကို .; နှင့် Prewitt, C. စည်းမျဉ်းတစ် variable ကိုစိတ်ဖိစီးမှုပါရာဒိုင်းကထုတ်လုပ် neuroendocrine စိတ်ဖိစီးမှု-integration circuitry အတွက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ Neuroendocrinology 61(2): 180–190, 1995. PMID: 7753337
Herman, JP; Dolgas, CM; နှင့် Carlson, SL Ventral subiculum သိမြင်မှုဖိအား hypothalamo-adrenocortical-pituitary နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိ။ neuroscience 86(2):449–459, 1998. PMID: 9881860
Herman, JP; Figueiredo, H ကို .; Mueller, NK; et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု၏ဗဟိုယန္တရားများ: hierarchical circuitry hypothalamo-pituitary-adrenocortical တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 24(3):151– 180, 2003. PMID: 14596810
Jacobson, အယ်လ်, နှင့် Sapolsky, R. အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏တုံ့ပြန်ချက်စည်းမျဉ်းထဲမှာ hippocampus ၏အခန်းကဏ္ဍ။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 12(2):118–134, 1991. PMID: 2070776
ဂျုံးစ်, KR; Myers, B, .; နှင့် Herman, အ prelimbic cortex ၏ JP စိတ်ကြွဆေး differential psychogenic နှင့်စနစ်တကျဖိအား neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု modulates ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ 104(2):266–271, 2011. PMID: 21443894
Keller-Wood က, ME နှင့် Dallman, ACTH Secret ၏ MF Corticosteroid တားစီး။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 5(1):1–24, 1984. PMID: 6323158
Koob, အ amygdala နှင့်စွဲလမ်းအတွက် gf ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို။ ဦးနှောက်သုတေသန 1293: 61-75, 2009 ။ PMID: 19332030
Lee က, hy; Whiteside, ကို MB; နှင့် Herkenham, အမ်ဧရိယာ postrema ဖယ်ရှားရေး stimulatory hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သွေးကြောသွင်း Interleukin-1beta ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွင်းက c-fos mRNA abolishes ။ ဦးနှောက်သုတေသနသတင်းလွှာ 46(6):495–503, 1998. PMID: 9744286
Magarinos, Am, Somoza, G .; နှင့် De Nicola, ကြွက်များတွင် hippocampectomy ပြီးနောက် AF Glucocorticoid အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်နှင့် glucocorticoid receptors ။ ဟော်မုန်းနှင့်အဲဒါတွေက Metabolic သုတေသန 19(3):105–109, 1987. PMID: 3570145
Marinelli, အမ်နှင့် Piazza, glucocorticoid ဟော်မုန်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulant မူးယစ်ဆေးများအကြားမှာ PV Interaction ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ် 16(3):387–394, 2002. PMID: 12193179
Munck, တစ်ဦးက .; Guyre, ညနေ; စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် pharmacological လုပ်ရပ်တွေကိုသူတို့ရဲ့စပ်လျဉ်း glucocorticoids နှင့် Holbrooke, NJ ဇီဝကမ္မဗေဒ။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 5(1):25–44, 1984. PMID: 6368214
Palkovits, အမ်နှင့် Zaborszky အလယ်ပိုင်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအယ်လ် Neuroanatomy ။ နျူကလိယ Tractus solitarii: Afferent နှင့် baroreceptor တုံ့ပြန်မှုကို arc စပ်လျဉ်း efferent အာရုံခံဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို 47: 9-34, 1977 ။ PMID: 928763
Plotsky, ညနေ; Cunningham, ET, Jr .; နှင့် Widmaier, corticotropin-releasing အချက်နှင့် adrenocorticotropin Secret ၏ EP Catecholaminergic မော်ဂျူ။ endocrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ 10(4):437–458, 1989. PMID: 2558876
Plotsky, ညနေ; Sutton, SW; Bruhn, TO သို့; နှင့်ဖာဂူဆန်, adrenocorticotropin Secret ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက် angiotensin II ၏အခန်းကဏ္ဍ၏ AV စနစ်အားသုံးသပ်ခြင်း။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 122(2):538–545, 1988. PMID: 2828001
Prewitt, CM ။ နှင့် Herman, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ JP Hypothalamo-pituitary-adrenocortical စည်းမျဉ်း။ စိတ်ဖိစီးမှု 1(4):263–280, 1997. PMID: 9787250
တစ်ဦးက dual-ကျေးရွာအုပ်စု-tracing ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ဗဟို amygdaloid နျူကလိယနှင့်ကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအကြား Prewitt, CM နှင့် Herman, JP Anatomical interaction က။ ဓာတု Neuroanatomy ၏ဂျာနယ် 15(3):173–185, 1998. PMID: 9797074
Radley, JJ; Aria, CM; နှင့် Sawchenko, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု acute လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် medial prefrontal cortex ၏ PE ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 26(50):12967–12976, 2006. PMID: 17167086
Radley, JJ; Gosselink, KL; နှင့် Sawchenko, PE တစ်ဦးက discrete GABAergic relay က neuroendocrine စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု medial prefrontal cortical တားစီး mediates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 29(22):7330–7340, 2009. PMID: 19494154
နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍ: တစ်ဦးအရက်အစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့ Rivier, C တို့အရွယ်ရောက်အထီးကြွက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးနေတဲ့တုံး adrenocorticotropic ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုပြ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန 19(6):1474–1479, 1995. PMID: 8749813
Sawchenko, PE; လီ, hy; နှင့် Ericsson က, အေတိုက်နယ်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic တုံ့ပြန်မှုအုပ်ချုပ်ယန္တရား: နှစ်ခု Paradigm ၏ပုံပြင်။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို 122: 61-78, 2000 ။ PMID: 10737051
Sinha, R. စွဲ relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုအစီရင်ခံစာများ 9(5):388–395, 2007. PMID: 17915078
ရှောလမုန်သည်ကို MB; ဂျုံးစ်, K သည် .; Packard, BA ဘွဲ့; နှင့် Herman, JP အဆိုပါ medial amygdala ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် modulates ပေမယ့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှု neuroendocrine မဟုတ်ပါဘူး။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ် 22(1):13–23, 2010. PMID: 19912476
Sutoo, ဃ, နှင့် Akiyama, K. Neurochemical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကိုထိတွေ့မှုကအောက်ပါကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန 134(1–2):347–354, 2002. PMID: 12191822
Tavares, RF; ကော်ရဲရား, FM ရေ; နှင့် Resstel, ကြွက်များတွင်စူးရှထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုများက evoked အဆိုပါ tachycardiac တုံ့ပြန် infralimbic နှင့် prelimbic cortex ၏ LB အတိုက်အခံအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ် 87(11):2601–2607, 2009. PMID: 19326445
Ulrich-လိုင်, YM; Figueiredo, HF; Ostrander, MM; et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဟာမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ adrenal hyperplasia နှင့် hypertrophy ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ် 291(5):E965–E973, 2006. PMID: 16772325
Ulrich-လိုင်, YM နှင့် Herman, endocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ JP ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်း။ သဘာဝတရားပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ neuroscience 10(6):397–409, 2009. PMID: 19469025
Ulrich-လိုင်, YM; Christiansen, Am, Ostrander MM; et al ။ အပျြောအပါးအပြုအမူတွေကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု 107(47): 20529–20534, 2010. PMID: 21059919
Vertes သည်ကြွက်များတွင် infralimbic နှင့် prelimbic cortex ၏ RP Differential စီမံကိန်းများ။ synapses 51(1):32–58, 2004. PMID: 14579424
Vertes, RP နှင့်ဟူးဗား, WB အဆိုပါ paraventricular ၏စီမံကိန်းများနှင့်ကြွက်များတွင် dorsal midline thalamus ၏ paratenial အရေးပါ။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ် 508(2):212–237, 2008. PMID: 18311787
Webster, JC နှင့် Cidlowski, မျိုးဗီဇထုတ်ဖော် glucocorticoid-receptor-mediated ဖိနှိပ်မှုဂျေအေယန္တရားများ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 10(10):396–402, 1999. PMID: 10542396
Wieczorek, အမ်နှင့် Dunn, ကြွက်များတွင် intraperitoneal Interleukin-1 အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ noradrenergic နှင့် HPA ဝင်ရိုး activation အပေါ် subdiaphragmatic vagotomy ၏ AJ Effect ။ ဦးနှောက်သုတေသန 1101(1):73–84, 2006. PMID: 16784727
Xu, Y ကို .; နေ့က TA; နှင့် Buller, KM အဆိုပါဗဟို amygdala စနစ်တကျ Interleukin-1beta အုပ်ချုပ်ရေးမှ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု modulates ။ neuroscience 94(1):175–183, 1999. PMID: 10613507
လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိုးအပေါ်မူတည်: Yavich, အယ်လ်, နှင့် Tiihonen, ဂျေအီသနော mouse ကိုနျူကလိယအတွက် evoked dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens modulates ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ် 401(3):365–373, 2000. PMID: 10936495
Ziegler, DR နှင့် Herman, အ hypothalamic paraventricular ဒေသတွင်း၌အချိုမှုအချက်ပြ၏ JP ဒေသခံပေါင်းစည်းမှု: glucocorticoid စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 141(12):4801–4804, 2000. PMID: 11108297